About us - Huacheng Automobile Izesekeli Co., Ltd.
I-Huacheng Automobile Accessories Co., Ltd. igxile ekukhiqizeni ama-valve wokuqeda amandla iminyaka engaphezu kwengu-25, etholakala esifundazweni sase-Hebei, i-valve ilungele iloli elisindayo, ezolimo, ezezimboni, injini yasolwandle, amasethi e-generator, imoto yomgibeli, injini yegesi kanye isithuthuthu.
Umthamo wethu wokukhiqiza waminyaka yonke ungaphezu kwama-PC ayisigidi esingu-8 wama-valve ahlukahlukene. Inkampani yaseHuacheng iqinisekiswe ku-ISO / TS16949 ngo-2008. Umkhiqizo wethu wochungechunge lwe-valve uhlanganisa imodeli yenjini yaseMelika, yaseJapane, yaseJalimane nazo zonke izinhlobo zohlobo lwenjini yasekhaya, esetshenziselwa kakhulu injini yeDizeli, ugandaganda, abembi njll. Kusuka ekuhlolweni kwempahla eluhlaza kuye kumkhiqizo ophelile ukupakisha, zonke izinqubo zilawulwa ngokuqinile.
Sineqembu elizimele lokucwaninga nentuthuko, ukuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe kanye nokuvuselelwa kwemishini eminyakeni yamuva, enjengokuthi: isithando somlilo esiqhubekayo sokwelashwa kokushisa, uhlobo lwe-U lokucima ku-valve end encane, i-Steli welding esihlalweni se-valve, ukuqinisekisa imikhiqizo yethu ukungaguquguquki nokwethembeka kokusebenza kwe-valve futhi uthole ukuqashelwa kabanzi kusuka kumakhasimende nakumakethe. singenza umkhiqizo omusha ngokususelwa kumdwebo we-valve noma isampula kusuka kumakhasimende.
Izinto zebhavu ye-valve ekhethekile, 4Cr9Si2,4Cr10Si2Mo, 21-4N, 23-8N, X60, X80, Inconel751,21-4NWNb.
Umugqa wokucubungula wokuxhumana we-CNC, isithando somlilo esiqhubekayo sokwelashwa kokushisa, ukushushumbisa ukungqubuzana, i-Steli welding, u-U quenching, i-chrome plating, i-nitriding ethambile
Amandla wokukhiqiza wonyaka
Izinyanga eziyi-12 noma i-300000km
Yakha futhi uthuthukise umkhiqizo omusha ngokuya ngesampula noma umdwebo.
Ayikho imfuneko ye-qty yesitoko.
Sihlala sibhekene emakethe nge "ngamakhasimende", siphikelela ezinhlosweni zekhwalithi "Imikhiqizo zero iphutha, Isikhalazo zero seKhasimende", sinikela ngentengo yethu yokuncintisana nensizakalo. Singabahlinzeki be-OEM beGeely Commercial Vehicle futhi sithumele i-valve yethu e-USA, Germany, France, Poland, Pakistan nase-Indonesia.
Wemukele ngemfudumalo abangane abavela kuwo wonke umhlaba futhi banethemba lokubambisana nawe, singathanda ukukunikeza ama-valves ethu aphezulu kanye nensizakalo.